घर युरोपियन स्टार टोनी कोरोस बचपन स्टोरी प्लस अनर्थ जीवनी तथ्य
नोभेम्बर 20, 2017
एलबीले पूर्ण स्टोरीको मिडफील्ड प्रतिभा प्रस्तुत गर्दछ जुन सबैभन्दा राम्रो नाम उपनाम हो। "वेटर"। हाम्रो टोनी कोरोस बचपन स्टोरी प्लस अनलल्ड जीवनी तथ्य तपाईले आफ्नो बचपनको समय बाट उल्लेखनीय घटनाहरु को पूरा खाता ल्याउनुहुन्छ। विश्लेषणमा प्रसिद्धि, सम्बन्ध जीवन, पारिवारिक जीवन र उनको बारे धेरै थोरै ज्ञात तथ्याङ्कहरू भन्दा पहिले आफ्नो जीवन कथा समावेश गर्दछ।
हो, सबैले आफ्नो क्षमताको बारेमा चिन्ता छ तर कम्युनिष्ट टोनी कोरोस जीवनीको बारेमा केहि कुरा उल्लेख गर्दछ। अब थप adieu बिना, सुरु गरौं।
टोनी कोरोस बचपन स्टोरी प्लस अनर्थ जीवनी तथ्य -बाल्यकाल
टोनी कोरोस जनवरी4को 1990th दिन ग्रीफ स्विल्ड, पूर्वी जर्मनी मा पैदा भएको थियो।
उनी आफ्नो आमा, ब्रेगिट केमर (पूर्व जर्मन ब्याडमिन्टन खेलाडी र वर्तमान खेल जीवविज्ञान शिक्षक) र बुबा, रोल्लान कोरोस (एक पूर्ववर्ती कुश्ती र फुटबल कोच) मा जन्मेका थिए।
आफ्नो बच्चा भाइ फेलिक्सको साथ बढ्दै जान्छ, टोनी सबैले उनीहरुलाई बच्चाको रूपमा चाहन्थे। तिनका आमाबाबुले उनीहरूलाई बिरोधको लागि यो कहिल्यै गाह्रो थिएन।
आफ्नो युवाको समयमा, उनी सबै भन्दा उत्कृष्ट विद्यार्थी थिएनन् र स्कूल टूर्नामेंटमा भाग लिन फुटबल अभ्यास गरिरहेका धेरै समय बिताए। यसबाहेक, टोनीले कक्षामा राम्रो व्यवहार गरे र राम्रो तरिकाले स्कूलमा आफ्ना साथीहरूसँग मनपर्छ।
बढ्दो, यो मानिन्छ कि टोनी कहिल्यै गिफ्ट फुटबलको रूपमा सोच्न सकेनन् तर यसको सट्टा कठोर कामको माध्यमले पिचमा सफलता खोज्न थाल्यो। यो मनोवृत्ति अन्ततः तिन र तिनका भाइ भाइ फेलिक्सको प्रशिक्षणमा आफ्ना बुबाको विद्युतीय काम नैतिकताबाट आएको थियो।
फेलिक्स र टोनी कोरोस युवा युवा क्यारियर- उनीहरूका बुबा, रोलाण्डको कामकाज
यद्यपि, बहुविधकार्यको साथमा एउटा मुद्दा थियो। किताब पढ्ने फुटबल संयोजन उनको कमजोरी थियो। उनले पहिलोमा फोकस गर्न रोजे र पछिल्लो मा कम ध्यान दिए। आदर्श रूप मा, टोनी कोरोस एक राम्रो विद्यार्थी थिएन जब यो अध्ययनमा आयो। उनले फुटबलको सबै प्रयासमा दिए।
ओभरटाइम प्यारा सानो केटा कहिल्यै कहिल्यै मूडी किशोरी भएन।
टोनी बाटोमा हरेक नयाँ जीवन चरणको लागि तैयार गरिएको थियो। उनको 17 उमेर मा बायर्न म्यूनिखको पहिलो टोलीको सदस्य हुँदा उनको कडा मेहनत र सफलता प्रकट भयो।
त्यस समयदेखि, विशेष गरी 2014 विश्व कप पछि, विश्वले टोनीलाई आधुनिक आक्रमणमा मिडफिल्डरको उत्कृष्ट अभिव्यक्तिको रूपमा चिनिन्छ।
टोनी कोरोस बचपन स्टोरी प्लस अनर्थ जीवनी तथ्य -सम्बन्ध जीवन
कोरोस उनको दीर्घकालिक प्रेमिका र कलेज स्कूल प्रिय जेसिका फारबर संग भएको छ। उनको सुन्दर वैग आफ्नो युवा क्यारियरमा आफ्नो सफलताको कारण थियो। उनको इनाम दिन को लागी, टोनी उसलाई उनको दिल को एकमात्र मालिक को रूप मा सीमेंट गर्न थियो।
दुई प्यार पक्षी- टोनी र जेसिका
जेसिका सुन्दर छ र राम्रो हृदय छ। उनी जर्मन पर्यटन क्षेत्रमा एक प्रसिद्ध विशेषज्ञ हो र सजिलै क्लासिक वाग अस्तित्वबाट टाढा रहन्छ (तलका विवरणहरू)।
उनले पहिलो पटक टोनीलाई भेट्टाएपछि उनीहरू एक साथ स्कूलमा थिए र एक समय उनले अकादमिकसँग फुटबल संयोजनको कठिनाईको सामना गरे। उनले उनलाई अकादमिक, सर्वोत्तम मार्गमा उनीहरूलाई सहयोग पुर्याए। उनीहरूले भेट्टाएको क्षणबाट दुई प्रेमिकाहरू अनावश्यक रूपमा देखिएका थिए।
टोनको भविष्यमा कुनै पनि महिलाको साथ भएको हुन सक्छ, तर जेसिका एउटै केटी थियो जुन उनीहरु चासो चाहन्थे जुन पनि अरुले चासो देखाए। वास्तवमा, टोनीले अन्य केटीहरु संग आफ्नो समय बर्बाद गरेन।
जेसिका फाबर एक शान्तिपूर्ण मायालु महिला हो जसले धेरैलाई तुलना गर्न सक्दैन जर्मन खेलाडीहरू'अनुहारहरू प्रकृतिमा उत्रिएका छन्। जेसिका फेरबर जानबूझकर सुन्दरीमा रहेको जस्तो बट्टा छाडहरू छनौट गर्छन्।
जुन 13 को 2015th दिन मा, जेसिका र टोनी एक गुप्त विवाह थियो। तिनीहरू विवाहको पहिलो छोरोलाई पछि विवाह गरे।
टोन Kroos विवाह फोटो
तिनीहरूको पहिलो छोरा, लियोको अगस्त 14 को 2013th मा जन्मिएको थियो। दोस्रो बच्चा, एक छोरी, एमिली 20 जुलाई 2016 मा जन्मेको थियो। टोनी एक वास्तविक बुबा हो जसले आफ्ना छोराछोरीको लागि गुणस्तरको समय पाउँछ जुन तल देखियो।
कोरोसले आफ्नो पत्नी, जेसिका फेरबरलाई फुटबल को बाहिर उनको मुख्य समर्थनको रूपमा वर्णन गर्दछ। यद्यपि जेसिका फेरबर साक्षात्कार गर्दैनन्, उनी क्लबको गला गतिविधि र देशका क्रियाकलापहरू जस्तै लोकप्रिय Oktoberfest मा तल देखेर सधैं विश्वासी रूपमा देखा पर्छन्।
टोनी र जेसिका ओकेटोबरफेस्टमा
टोनी कोरोस बचपन स्टोरी प्लस अनर्थ जीवनी तथ्य -पारिवारिक जीवन
फुटबलको अन्ततः उनको लागि भुक्तानी नगरे सम्म टोनी कोरोस मूल माध्यमिक पारिवारिक पृष्ठभूमिबाट थियो।
उनको पिता रोल्याण्ड कोरोस एक पूर्व पेशेवर पहलवान थियो जो पछि एक युवा कोच भयो। उनले लेखन को समयमा हान्सा रोस्तोक को लागि युवा कोच हो।
उनले पहिलो पटक आफ्नो युवा कोचिंग क्यारियर सुरू गरे, उनी आफ्ना दुई छोराहरूलाई ग्रीफस्लेडर एससीमा प्रशिक्षण दिइन्। आफ्नो बचपनको कोरोस चलिरहेको र प्रशिक्षणको राम्ररी सम्झनाहरू संग उनको भाइ र बुबा संग लगातार।
रोनाल्ड कोरोस - लेटा राम्रो फाउण्डेसन आफ्नो छोराको लागि
Birgit Kmermer Kroos (तल चित्रित) टोनी कोरोस र पत्नी को सुपर माम रोल्याण्ड कोरोस हो।
Birgit Kmmer - आमा टोनी कोरोस मा
त्यो जून 16, 1962, ग्रीस मा जन्म भएको थियो। Birgit Kmmer एक जर्मन जर्मन बैडमिंटन खेलाडी हो जसले आफ्नो छोरा जस्तै जस्तै, आफ्नो देशमा गर्व बनाएको छ। आफ्नो घरको क्लब इकाई ग्रेफस्वाल्ड को लागि उनको क्यारियर दुई डीडीआर सिंगल खिताब र आठ डीडीआर टीम को खिताब मा जीता।
बर्गाइट कोरोस आज राोस्टोकमा बस्छन्। उनी अहिले जीवविज्ञान र खेलकुद शिक्षकको रूपमा काम गर्छन्। उनको छोराहरूले परिवारको खेलकुद परम्परालाई फुटबल व्यवसायीको रूपमा जारी राख्छन्।
कान्छो भाइ: टोनी कोरोससँग फेलिक्स कोरोस नामक एक सानो भाइ छ।
उनी मार्च 12 को 1991th मा जन्मे (1 वर्ष छोटा टोनी को)। गोला मिडफिल्डर, जो कि कथित तौर मा स्कूल को पढाई संग धेरै व्यस्त थिएन, जो संधै फुटबल को खेलन को रूप मा प्राथमिकता दिइयो।
अझै पनि दुःखको कुरा आफ्नो सफल भाइको ओछ्यानमा छायाको छायामा, फेलिक्स कोरोस ले टोनी भन्दा धेरै फुटबल फुटबलको लागि सीढी फेला पारेको छ।
वेरडर ब्रेमेन को पूर्व, फेलिक्स ले मिडफील्ड मा नियमित शुरुवात स्थान नाखून गर्न को लागि संघर्ष गरे र € 500,000 को लागि यूनियन बर्लिन मा स्थानांतरित भयो। उनको इनामको सूची वास्तवमा आफ्नो पुरानो भाइको तुलनामा धेरै कम छ, तर उहाँले 2007 जित्नुभयो 'वर्षको प्रतिभा' मकलेनबर्ग-वोरोपोमेमेनमा पुरस्कार
फेलिक्सले आफ्नो क्यारियरमा उत्कृष्ट बहुमुखीता प्रदर्शन गरेको छ, एक अग्रिमको रूपमा सुरू गरे, तर उनको क्यारियरमा खेल समय प्राप्त गर्न मध्य-अर्काको रूपमा खेलेका थिए। उहाँले आफ्नो पिता र पूर्व प्रशिक्षक (तल हेर्नुहोस्) हरेक उपलब्धिको लागि उनी र तिनको भाइले हासिल गरेको छ।
जवान फेलिक्स र बुबा; रोल्याण्ड कोरोस
टोनी कोरोस बचपन स्टोरी प्लस अनर्थ जीवनी तथ्य -विश्व कप तथ्य
धेरैका लागि, यो एक आश्चर्यको रूपमा आउँछ, तर तपाईले 2014 लाई विचार गर्दा वास्तवमा यो होइन जर्मन राष्ट्रीय टीमपहिलो विश्वकप विजयी भए पछि देश 1990 मा पुन: प्रमाणित भयो।
यसअघि, पूर्वी जर्मनी आफ्नो पश्चिमी छिमेकीहरूको तुलनामा अन्तर्राष्ट्रिय चरणमा बेकार थियो।
अब, टोनी कोरोस तथ्य ?? ... ..ट्राउथ हो ... उहाँ सम्पूर्ण 2014 विश्व कप विजेता टोलीमा मात्र एक व्यक्ति हुनुहुन्थ्यो जुन पूर्वी जर्मन क्षेत्रमा जन्मिएको थियो। उहाँ ग्रेफस्वल्ड, मेक्लेनबर्ग-वोरोपोमेनबाट आउनुभयो।
यस तथ्यले प्रस्तुत गर्दा, कोरोस आफैले समान रूपमा अचम्म लागे, "म वास्तवमा मात्र एक मात्र हुँ? म तिनीहरूका आमाबाबुको रूपमा ती धेरै पटक छुइनँ। "
टोनी कोरोस बचपन स्टोरी प्लस अनर्थ जीवनी तथ्य -उनको उपनाम पछिको कारण
त्यसैले शानदार छ कोरोस गुजरने क्षमता हो, जुन उसले उपनाम कमायो "गारकन" or "वेटर"ग्रीष्मकालीन विश्व कपको दौडान।
कोरोसले आफ्नो टोलीलाई क्षुद्रग्रह पास गर्दै थिए र टूर्नामेंटमा उनीहरूलाई यति राम्रो तरिकाले स्थापित गर्दै थिए कि मेजबान राष्ट्रले उनीहरूलाई 76 बाहिर 79 पूरा गरेपछि उपनामको योग्यता पोर्चुगल विरुद्ध 2014 विश्व कप समूहको म्याचमा पास पारिएको थियो।
सांख्यिकीय, कोरोस टूर्नामेंट मा सर्वश्रेष्ठ प्लेयर थियो।
टोनी कोरोस बचपन स्टोरी प्लस अनर्थ जीवनी तथ्य -क्यारियर सारांश
कोरोसले स्थानीय क्लबको लागि खेलेका थिए Greifswalder SCपछि पछि युवा समुहलाई हस्तान्तरण गर्दै हान्सा रोस्तोक। कोरोस सारियो Bayern म्यूनिखको युवा सेटअप 2006 मा। प्रशिक्षणको कारण स्कूल वर्षको अवधिमा क्रोम एकपटक 40 दिन सम्म हराइरहेको थियो। लागि 2007-08 सिजन, 17 को उमेर मा, कोरोस बायर्न को वरिष्ठ टीम को लागि पदोन्नति गरिएको थियो।
2006 टोनी कोरोस मा बायर्न म्यूनिखको युवा टोली संग शुरु भयो। उनले 2007 मा पहिलो टोलीलाई पदोन्नति गरे। त्यो समयमा केवल 17 वर्ष पुरानो थियो। यो 2009 / 10 सीजनमा बायर्न लेभरकुसेन को लागी एक ऋण पछि लागिएको थियो। उनले उनीहरूको लागि 33 म्याच खेले। उनले त्यो सिजन समाप्त गरे9लक्ष्य र 12 सहयोग।
बायर्न लेभर्कोसेनले सफलतालाई अर्को सिजनमा बायर्न म्यूनिचमा फर्किदियो। उनले3Bundesliga खिताब, बायर्न म्यूनिख र 2014 फीफा विश्व कप (2 लक्ष्य र4सहयोग) सँग एक चैंपियन्स लीग जीता। उनले गोल्डन बल जितेकी थिइनन् लिओनेल मेस्सी। उहाँ पठाइयो रियल म्याड्रिड 2014 मा एक अज्ञात शुल्क को लागी।
टोनी कोरोस बचपन स्टोरी प्लस अनर्थ जीवनी तथ्य -सेवानिवृत्ति पछि के त्यो सम्झना हुनेछ
तिनको गुणात्मक सटीकताको लागि प्रविधि, दृष्टि र लक्ष्य सेटअप गर्ने क्षमता, साथै उनको लामो दृश्यहरू र सेट-टुक्राहरूबाट बल वितरण।
गतिशील र मेहनतको लागि।
तिनको बहुमुखीता, भौतिक शक्ति र धेरै मिडफील्ड पदहरूमा खेल्ने क्षमताको लागि।
झ्यालखानामा गहिरो झूटो प्लेमकरको लागि, एक बक्स-देखि-बक्सको भूमिकामा, वा रक्षात्मक मिडफिल्डरको रूपमा पनि।
दुवै ब्रेक अप खेल्ने क्षमताको लागि, स्वामित्व राख्नुहोस्, र टोलीका लागि मौका सिर्जना गर्नुहोस्।